Hidhaa fi Dararaan Ilmaan oromoo irratti jabatee itti fufee jira. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHidhaa fi Dararaan Ilmaan oromoo irratti jabatee itti fufee jira.
Warri kun warra Sanqalleetti hidhame dha.Har’a Mana Murtiitti dhiyaatanii jiru. Hundi isaanii “Miseensa Abbaa Torbee’’ taataniittu jedhamanii dharaan himataman.Oromootni kun godinaalee adda addaatti kan ukkaamfaman yoo ta’uu kijibaan galmee tokko jalatti miseensummaa Abbaa Torbeen himataman.
Goota Abbaa Haaqa
Godina Booranaa Bakkoota hedduutti Motorcylewwaan Ummata irraa RIBtin Qabeenya ABOti jedhanii guuran fi fknf kan Godina Gujii bakka tokkotti Motorcycle 233 kan guurame tokko tokkotti Qarshii
5000 akka baasani fudhatan itti Murtaa’e.
233×5000= 1,165,000 “Miliona tokkof kuma dhibba tokkof kuma jaatamii shan”
Kun Mootummaa biyyan bulcha ofiin jedhuuf qaanii guddaadha.
BREAKING NEWS Wanti kun dhugaadha. Isiniif wayyoo warrii akkas gootan.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obboo lammaa magaarsaa summii waajjira isaanitti nyaatan makamee kennameen midhamaa guddaan irraa gahee jira. Torbee lamaaf Hoospitaalaa biyyaa jaarmaan keessaati yaalama jiraatullee lubbuun deebi’ee galuu isaa shakkisiisaadha. Akka ragaan hoospitaalaa argamee ibsuutti akkasumaas aantota lammaa irra dhagahametti summiin wajjiraa-ti qophaa’ee sa’aatii laaqana irraatti itti aantu pireezidaantii MNO aaddee xayibaa Hasan naannoo biiroo isheeti qopheessite Kamaal Gantuu waliin qodaa adda addaan akka dhiheessite sadi taa’ani nyaatanii booda guyyaa itti aanuu ofi wallaalu isaa himachaa jira. Xayibaaf kamaal Lammaa galaafatanii. ALAMAAYYOO ATOOMSAAs warreen ajjeesan Junaddiin Saddoo fi abbaa duulaa akka ta’aan ragaan qabatamaan harka keenya jira.kun immoo jibba uummata wallaggaa irraa qaban agarsiisa.garuu waanti isaan beeku qaban tokko du’ee tokko akka ta’ee hin nyaanne wal gaggalaffana malee.
Rabbi akka hojii keeti si haa fayyisuu lammaa magarsaa warra summii si nyaachise immoo hiddii isaan haa summaa’uu.